Fiaramanidin’ny tafika frantsay no efa voamana hitondra azy ireo hiverina ao Parisy. Nandalo tao Tokyo, manao fitsirihana teknika sy solika, ny fiaramanidina mialoha ny hanohizany ny dia miazo an’i Parisy. Tsy nahandry izany ry Edouard Philippe fa nanofa fiaramanidina manokana sy tsara kokoa hitondra azy ireo nody. 350 000 euros na 1335 tapitrisa Ariary ny saram-panofana ilay fiaramanidina, izay samy Airbus A340, fa ity mihaja kokoa. Nielanelana adin’ny roa ny fahatongavan’ireo fiaramanidina tao Parisy. Tonga tsy nisy olona ilay fiaramanidin’ny Tafika. Tototry ny fanankianana izay tsy izy ingahy Edouard Philippe noho izao fandaniana mihoampampana izao.
Ao Santiago renivohitr’i Chili no vinavian’ity kintan’ny kitra manerantany, izay efa in-dimy nahazo “ballond’or” ary vao tamin’ity 2017 ity ny farany, hisantarana ny fanorenena io hopitalin-jazakely io ary mety hiitatra any Amerika Latina izany. Amin’ny taona 2020 no hanatanterahana azy. Hifarimbona amin’i CR7 amin’ny fanatanterahana izany tetikasa izany ilay mpanefoefo teratany italiana Alessandro Proto.ROYAUME-UNI
Mitombo isa ny tovovavy mamono tena
Ireo tovovavy eo anelanelan’ny 20 ka hatramin’ny 24 taona no tena be mamono tena any amin’ity firenena ity. Mampivarahontsana ny antontanisa mivoaka. Nahatratra 118 izy ireo, izany hoe 76%-n’ny famonoan-tena tamin’ny taon-dasa raha 67% izany tamin’ny 2006, folo taona lasa. Resaka «selfie» no antony, variana dia voadona, na manao lozam-pifamoivoizana, na latsaka anaty tevana, hantsana, rano …
Misongadina ny boxe any Cameroun
Raha malaza amin’ny taranja ady totohondry i Cuba sy zareo amerikana dia manomboka misongadina ihany koa izao ny sekolin’ny boxe aty Afrika, ary mitarika amin’izany ry zareo atsy Cameroun. Mamiratra ry Takam, M’Bili, Fokou, Hassan N'Dam… ity farany izao dia tompondaka erantany amin’io taranja io, ary niaro ny voninahitr’i Cameroun tamin’ny Lalao olimpika 2016.
Noravan’ny lambo ny fanadinana
Hafa indray ity. Niditra an-tsekoly ny lambo na kisoa dia. Lasibatra ny tao amin’ny lisea iray any Kyoto ny alatsinainy teo. Teo ampanaovana fanadinana indrindra ny mpianatra tao no nanao fiditra ao ampianarana, nitety efitranon-tsekoly ny lambo anankiroa, nandratra mpianatra iray. Voatery notifirina tamin’ny basy elektrika ireo lambo nanakorontana ireo. Niato hatramin’ny fanadinana noho io tranga io. Matetika no ahitana lambo miakatra an-tanàna any Japon vokatry ny fanimban’ny olona ny ala izay toerana voajanahary fonenan’izy ireo.